Ebumnuche asaa iji mee ka ederede Email gị dị ọcha na otu esi kpochapụ ndị debanyere aha | Martech Zone
Anyị na-elekwasị anya na ahịa email n'oge na-adịbeghị anya n'ihi na anyị na-ahụ ọtụtụ nsogbu na ụlọ ọrụ a. Ọ bụrụ na onye isi na-aga n'ihu na-atụ gị ụjọ na listi email gị, ị ga-atụrịrị ha aka na edemede a. Nke bụ eziokwu bụ, na ibu na okenye gị email ndepụta, ihe mmebi ọ nwere ike ịbụ na-enwe na gị email ahịa irè. Kama nke ahụ, i kwesịrị ilekwasị anya ole ndị debanyere aha gị nwere na ndepụta gị - ndị na ịpị ma ọ bụ n'ịtụgharị.
Ihe mere ị ga - eji kpochapu aha Email gi
Ntughari - ISPs gbochie ma ọ bụ tinye email gị na junk nchekwa dabere na dara ogbenye IP izipu aha. Ọ bụrụ na ị na-eziga adreesị email mgbe niile, ọ ga-emetụta aha gị.
Elekere ijiji - Ọ bụrụ na aha gị dara ogbenye, enwere ike igbochi email gị niile.
Ego - Ọ bụrụ na ọtụtụ nke ozi ịntanetị gị na-eme ya na igbe mbata ya na ndị debanyere aha na-arụsi ọrụ ike, nke ahụ ga-emepụta ego ọzọ.
-eri - Ọ bụrụ na ọkara nke ozi email gị niile ga-aga adreesị email nwụrụ anwụ, ị na-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ ihe ị kwesịrị iso onye na-ere email gị. Sacha ndepụta gị ga-ebelata ego ESP gị.
Icheta - Site n’ịkọwa ndị debanyere aha gị na-adịghị arụ ọrụ, ị nwere ike izipu onyinye na-enyeghachi ha ozugbo, lekwasịrị ha anya na mgbasa ozi mgbasa ozi, wee hụ ma ị ga - eme ka ha banyeghachi.
mmekọrịta - Site n’inwe ndepụta dị ọcha, ị maara na gị na ndị debanyere aha na-elekọta ka ị wee nwee ike ilekwasị anya n’ozi gị.
akuko - Site n’ichegbughi onwe gị banyere nha ndepụta ahụ na ilekwasị anya na njikọ aka, ịnwere ike nweta data ziri ezi banyere etu mmemme nurturing na email gị si arụ ọrụ.
Anyị na-akwado ndị mmekọ anyị na Neverbounce maka gị ọrụ nkwenye email! Algọridim ha na nkwenye ndị ọzọ emeela nnukwu ọdịiche na nnweta ndị ahịa anyị. Agbanyela awade ndenye onyinye nkwenye ziri ezi nke 97%. (Kwesịrị karịa 3% nke ozi ịntanetị gị bara uru mgbe ị gachara ọrụ anyị, ha ga-akwụghachi ihe dị iche.)
Atụmatụ ndị na-enweghị atụ gụnyere:
Usoro nyocha usoro 12 - Iji MX, DNS, SMTP, mmekọrịta, na teknụzụ ndị ọzọ na-achọpụta ịdị adị nke adreesị, usoro nnwale 12-nzọụkwụ anyị na-enyocha email ọ bụla ruo ugboro 75 site na - dị iche iche gburugburu ụwa.
Free Analysis Ngwá Ọrụ - Nwaleenụ data gị na-enweghị ọnụ. Anyị ga-akọghachi ma ọ dị mma izipu ma ọ bụ na ọ dị mkpa ka ehichaa ya na ọnụego ibiaghachi. Dịka onye ahịa nke NeverBounce, ị nwere njirimara a na - akparaghị ókè. Ọzọkwa, ị nwere ike iwulite nyocha ha n'efu na sistemu nke gị site na API na enweghị ọnụ.
Edepụta ndepụta Free - NeverBounce awade free de-mbiputegharị na ihe ọjọọ syntax iwepụ tupu inye a ngụkọta na-eri maka ọrụ gị. Anyị anaghị akwụ ụgwọ maka nsị.
Ha Anaghị Eji Data Mere Eme Eme - Ozi ịntanetị na-agbanwe mgbe niile, ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ nkwenye na-echekwa ego site na ịnye nsonaazụ akụkọ ihe mere eme, anyị na-enyocha ozi ịntanetị gị oge ọ bụla, na-eme ka azịza kachasị ọhụrụ na nke kachasị mma. Na oge ịgbagha kachasị ọsọ na azụmaahịa a, ị gaghị echere ogologo oge iji hichaa ma nyochaa ndepụta gị.
Nyochaa Ndepụta Email Gị n'efu Ugbu a!
Ihe omuma a site na Ndị mọnk Email na-enyekwa ndepụta usoro iji kpochapụ ndị debanyere aha ma hichaa listi email gị nke ọma.
Tags: nọ n'ọrụ ndị debanyere ahaibiaghachi-azudị ọcha email ndepụtannapụtaemail dị ọchaemail ọchaọnụahịa emailaha emailego emailemail nkewaonye na-enye ọrụ emailemail debanyere ahankwenye emailespụgwọ espndị anaghị edebanye ahakpochapụ ndị debanyere ahare-ntinye aka
Hotter than Hot: Na-ewebata Ntụziaka Nzuzo Ọhụrụ maka Ahịa na LinkedIn
Gafere ndị na - egbochi ya: Otu ị ga - esi hụ mgbasa ozi gị, pịa ya ma mee ya